သိရိမင်္ဂလာဈေး -၂ ~ စန္ဒကူး
အယ် တပုံကြီး အကုန်ရချင်တယ် :)
အပေါ်က ပဲ (အမည်မသိ) ပဲပုဇွန်သီး(သို့) နွေပဲသီး
နောက်တမျိုးက အာကြားနဲ့က ထောပတ်ပဲ ထင်တာပဲ
စုံနေအောင် ရိုက်ခဲ့တာဘဲ။ လေးစားပါတယ်။ အလွမ်းပြေလေးပေါ့။ အောစွန်းကြော်၊ စမုံစပါးနဲ့ ကြက်ဥကြော်၊ ပဲလိပ်ပြာချက်၊ ဇီးဖြူသီးထောင်း စားချင်တယ်။ ပုံတွေ ကြည့်ပြီး စိတ်ကူးထဲမှာ ဟင်းချက်ဖြစ်သွားတယ် :)
ကိုကြီးကျောက်တို့ဖက်မှာ ပေါတယ် စားကောင်းတယ်၊
US မှာ ပဲမြစ်နဲ့ ဇီးဖြူသီးတော့မရဘူး ကျန်တာတွေအကုန်ရတယ်၊ ဇီးဖြူသီးက ကယ်လီဖိုးနီယားဖက်တော့ရတယ်ပြောတာပဲ..
ဇီးဖြူသီးမရှိတော့ အကိုကြီးတော့ သံလွင်သီးဆားစိမ်စားနေရတယ်..အရသာတော့ ခပ်ဆင်ဆင်ပဲ
စားလို့ရလားဟင်လို့မေးတော့ ..မစားနဲ့သေတတ်တယ် ဆိုပီးရွဲ့ပြောတာရယ်.. သူတို့စိတ်ထင် ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် မေးတယ်ထင်လားမသိပါဘူး.. နောက်မှ တစ်ကယ်မသိမှန်းသိမှ သေချာရှင်းပြတာ... အဲလို..း)
စာလိုရေးရင်..ရှားစောင်းချဉ် လို့ရေးတယ်..အဟဲ..အကိုကြီးလဲ အသက်ကြီးတော့ ရေးထုံးတွေ မေ့ပြီလေ၊ ပြောတော့ တစောင်းချဉ်လို့ပြောကြတာ
အို..... အစုံပါပဲလား အစ်မကူးကူးရေ... ပုံတွေ အားလုံး ကြည့်သွားပါတယ်။ ခရမ်းကျွတ်သီး ခရမ်းရောင်လေးတွေ လှလိုက်တာ။ ပဲမြစ် ဆိုတာ ဘယ်လို အရသာ ရှိမှန်း မမှတ်မိတော့ဘူး ပာင့်း(
အံမယ်လေး ဒါတွေအားလုံးကို မိုးယံလက်ထဲ အပ်လိုက် ရောသမမွှေဟင်းကို နဲ့ လျှာဂျွမ်းပြန် အရသာနဲ့ ချက်ကျွေးပြမယ်..
ဟို ပဲ အမည်မသိက ပဲစင်းငုံလေ အနော်တို့ဆီမှာတော့ ပြုတ်စားကြတယ်.. ကျန်တဲ့နေရာတွေ ဘယ်လိုခေါ်လဲမသိ၊
အဲဒီကောင် ပေါ်ချိန်ဆို အထက်တန်းကျောင်းတုန်းက အဲဒါတွေ ပြုတ်ရောင်းတာကို မုန့်ဈေးတန်းက ၀ယ်စားနေကြ...
အဲလိုဈေး နီးနီးနားနားရှိချင်လိုက်တာ။ ဈေးဝယ်ရတာကိုက ပျော်စရာကြီးနေမှာ။ စားချင်တာတွေ အများကြီးပဲ။
ဘဲသွေးန့န့ပင် ရှောက်သီး.... ပျော်စရာကြီး
ညီမလေး ကူးကူးရေ ...
အစုံပါပဲလား ။ ဓါတ်ပုံတွေမှ အများကြီး ...
စားချင်စရာ တွေချည်းပဲ ....
ဈေးထဲ လူရှုပ်ရှုပ်မှာ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ရဲတာ ချီးကျူးတယ်။
ဒီလောက်စုံတဲ့ ဈေး ဒီဘလော့ပေါ်မြင်ရတာ ၀မ်းသာစရာ
တဇောင်းချဉ်က ငပိချက်ချက်စားလည်းကောင်းတယ် နည်းနည်းလေး ခပ်သက်သက် ရှိတယ်.
ငရုပ်သီးအောက်က ဗိုလ်စားပဲ အဲဒီအောက်က ပဲက ကချင်ပြည်နယ်မှာတော့ ၀က်ခေါက်ပဲလို့ခေါ်ပါတယ်.. ခပ်အိအိနဲ့နေတာမို့ပါ.
ပုံတွေမြင်ပြီး အတော်ပျော်သွားတယ်.. လွမ်းနေတဲ့ အသီးအနှံတစ်ချို့မြင်လိုက်ရလို့
ဘေဘီရေ.. နွေပဲသီး ဟင်းချို ချက်စားရင်သိပ်ကောင်းနော်.. ပိန်းဥဖြစ်ဖြစ် အာလူးဖြစ်ဖြစ်နဲ့လေ..
ကူးကို ကျေးဇူးပါနော် ပုံတွေများကြီးတင်ပေးထားလို့
ကူးကူးရေ ... ကျေးဇူးပါနော်
ရန်ကုန်ကဈေးသည်တွေ သဘောကောင်းကြပါတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်လို့ခွင့်တောင်းတော့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို လှအောင်ပြန်စီပေးလိုက်သေးတယ်။ ငါးတန်းသွားတော့လဲအဲလိုဘဲ..ဒီကိုလဲရိုက်ပါအုံး... ဒီငါးကြီးက အကြီးကြီး.. ရိုက်ပါအုံးနဲ့ လက်ကိုမလည်ဘူး။ ပျော်ဖို့လဲကောင်းတယ်.. သူတို့လဲ ပျော်နေကြတာဘဲ..
အချို့က အင်္ဂလိပ်လိုတောင် လိုက်ရှင်းပြနေသေးတယ်။ ညီမလေးနဲ့ သယ်ရင်းက တစ်ခွိခွိနဲ့ရီနေတာ.. အနောက်ကနေ.. ဟီးဟီး....
ကောက်ရိုးမှိုတွေ စားချင်လိုက်တာ။ ထောပတ်ပဲလည်း လွမ်းတယ်။ ဘဲသွေးကို အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲနဲ့ စားလိုက်ရရင်တော့ - ရှလွတ်။ သွားရည်ကျပြီး ပြန်သွားပြီ မမကူးရေ။
ရှားစောင်းချဉ် နဲ့ ခါး ကစားလို့သိပ်ကောင်းတာ မညက်တညက်လေးထောင်းပြီးခြောက်ခြောက်လေး ချက်စားအရမ်းကောင်းတယ် စားပြီးလို့ ရေသောက်ရင် ချိုသွားရော
နံနံပင်က ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်စိုက်ကြည့်ပါလား။ အရမ်းလွယ်ပါတယ်။ မြေနေရာမရှိရင်တောင် ဖော့ပုံးလေးထဲ မြေကြီးထည့်ပြီးစိုက်လို့ရတယ်ခင်ဗျ။ အိမ် ၀ရံတာမှာ နောက်ဖေးမှာ လွတ်တဲ့နေရာပေါ့ဗျာ။ အအေးဒဏ်လဲ တော်တော် ခံနိုင်ပါတယ်။ ရေခဲအမှတ်ရောက်ထိ မသေပါဘူး ။ တနှစ်လုံး စိုက်လို့ရတယ်ခင်ဗျ။ နံနံစေ့လဲ ရှာရခက်မယ်မထင်ပါဘူး။ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် နဲ့ အချိန်မရွေး စားလို့ရတာပေါ့ဗျာ။
စိုက်တာတော့ခဏခဏဘဲ.. အိုးထဲထည့်စိုက်တယ်၊ ဖော့အိုးနဲ့စိုက်တယ်.. မြေကြီးပေါ်ချစိုက်တယ်...
ပေါက်လာတယ်..ဒါပေမယ့် လက်တစ်ဆစ်ထက်ပိုမရှည်လာ ဘူး... ကြိုးစားနေတာ (၅) နှစ်ပြည့်တော့မယ်ခုထိမအောင်မြင်သေးဘူး။
ဆက်ပြီးကြိုးစားပြီးစိုက်ကြည့်ပါဦး။ ဖော့ပုံးနဲ့စိုက်ရင် ပုံးကိုအောက်က အပေါက်ဖောက်ပေးပါ။ နံနံစေ့ကို ရေ ၂ ညလောက်စိမ်ပြီးမှစိုက်ပါ။ မြေကြီးက မြေဆွေးကပိုကောင်းတယ်။ ၀ယ်လို့ရနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ ငြုပ်၊ ကြက်ဟင်းခါး။ ချဉ်ပေါင်၊ စပါးလင်၊ အကုန်စိုက်လို့ရပါတယ်။ ကိုယ်စိုက်ထားတာကိုယ်ဆွတ်စားရတာ ပိုပြီးအရသာရှိတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။ အောင်မြင်အောင်စိုက်နိုင်ပါစေခင်ဗျာ။